Momba anay - Xingtai Tianzheng Sealing Co., Ltd.
Xingtai Tianzheng Sealing Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina amin'ny vokatra fitrandrahana fingotra naorina tamin'ny 2010, ary miorina amin'ny tanàna Xingtai, Provinsi Hebei China, akaikin'ny Capital Beijing sy seranan-tsambo Tianjin. Izahay dia manana ekipa R&D mahery indrindra sy mandroso, varotra ary famokarana, mpiasa maherin'ny 100. Ny orinasanay dia manana teknolojia manokana sy fitaovana sarotra. Fitaovana isan-karazany azo vokarina ao anatin'izany ny EPDM, PVC, VITON, NBR, SILICON ary ny stronjy spaonjy. Amin'izany no ahafahantsika manamboatra srtips am-baravarana, fantsom-baravarankely, kofehy kabinetra, kofehy mekanika .Ny vokatra lehibe dia be mpampiasa amin'ny fiara sy manangana indostrialy. Amidy be ny vokatra eran'izao tontolo izao.
Xingtai Tianzheng tombo-kase Co., Ltd. dia orinasa feno izay mamokatra karazana kojakoja isan-karazany toy ny fiara, môtô, motera, mpamokatra solika, sambo, milina enjeniera, sns. Ny vokatra lehibe dia: ny karazan-tsoratry ny famehezana rehetra , gasket fantsom-panafody, tombo-diloilo, tombo-kase menaka valizy, tombo-drano, fonosana fanamboarana, fonosana fanamboarana kely, kiraro fanamoriana môtô, fiara, kaontenera, fanamboarana sy haingon-trano fanamafisam-peo famehezana, sivana, tariby misy herinaratra avo lenta, sns. teknolojia famokarana tsipika, mampiditra fitaovana fanandramana kalitao haitao avo lenta ary mametraka rafitra rafitra fampandrosoana bobongolo vokatra vaovao. Araka ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny fotoana rehetra, afaka mamorona vokatra manome fahafaham-po ny mpanjifa ao anatin'ny fotoana fohy isika. Vokatra manomboka amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana ka hatramin'ny varotra, misy rafitra fitantanana feno, izay manatsara ny kalitaon'ny vokatra. Noho ny fahasamihafan'ny vokatra, ny kalitao, ny vidiny mirary, ny serivisy eo amin'ny toerany, mahazo ny fitokisan'ny mpanjifa, ny vokatra dia aondrana any Azia atsimo atsinanana, Afovoany Atsinanana, Afrika, Amerika atsimo ary firenena sy faritra maro hafa. Ny kalitao no fototry ny fahaveloman'ny orinasa, ny lazany no fototry ny fampandrosoana ny orinasa, ary ny serivisy no loharanon'ny firoboroboan'ny orinasa. Xingtai Tianzheng seal Co., Ltd. dia vonona ny hiara-miasa amin'ny olona manam-pahaizana manerana an'izao tontolo izao mba hamoronana ho avy tsaratsara kokoa.
Ny vokatray dia amidy any Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient, Afrika, Amerika atsimo ary firenena sy faritra maro hafa noho ny vokatra feno, kalitao azo antoka, vidiny mirary ary serivisy tsara. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, ny mpiasanay dia hifandray aminao amin'ny voalohany.